लोडसेडिङ गराउने अपराधीहरुका कारणले मात्रै लोडसेडिङ भएको हो ? | Hakahaki
लोडसेडिङ गराउने अपराधीहरुका कारणले मात्रै लोडसेडिङ भएको हो ?
घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेपछि बिजुली चोरेर बेच्ने गिरोहको निद्रा हराएको छ ?
१ मंसिर, काठमाडौ । यसअघि दैनिक १८ घण्टासम्म हिउँद-बर्खा, दिन-रात सधैं लोडसेडिङ हुन्थ्यो । अहिले नयाँ विद्युत थपिएकै छैन, तर लोडसेडिङ हटेको छ । आखिर हिजो किन र कसरी लोडसेडिङ हुन्थ्यो ? अनलाइनखबरमा खबर छ :
ती प्राविधिक कर्मचारीले भने- लोडसेडिङका नाममा प्राधिकरणका हाकिमले जनतामाथि अपराध गर्दै आइरहेका थिए । हिजो बिजुली नपुगेर लोडसेडिङ भएकै होइन, लोडसेडिङ गराउने अपराधीहरुका कारणले मात्रै लोडसेडिङ भएको हो ।
प्राधिकरणका प्राविधिकले भने- जनतालाई त यो प्राविधिक विषय थाहा हुँदैन कि कति विद्युत चाहिन्छ र कति घण्टा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ?
तर, के वर्षौंसम्म जनतालाई लोडसेडिङको अँध्यारोमा राखेर उनीहरुको व्यवसाय चौपट बनाउने प्राधिकरणका पूर्वहाकिम एवं पूर्वउर्जामन्त्री र कमिसनखोरहरुमाथि अब कुनै कारवाही हुँदैन त ? स्रोतले भन्यो- ‘यो सामान्यखालको अपराध होइन, त्यसरी लोडसेडिङ गराउने अपराधीहरुलाई अब जेल पठाउनुपर्छ र देशलाई लोडसेडिङबाट सधैंका लागि मुक्त बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल विद्याुत प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङ गराउनेहरु को-को थिए भनेर सोको तथ्यांक संकलन गर्ने अनि तिनीहरुमाथि कारवाही अघि बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको बताइन्छ ।